China Kuzvichenesa firita yekuchengetera dzimba yemvura ine simbi isina simbi zvinhu Kugadzira uye Fekitori | Hanke
Kuzvichenesa-yega firita yekuchengetera dzimba dzemvura ine simbi isina chinhu
Kuenderera mberi kwemvura
Anoshanda Sefa chiyero
Yakakwira filtration chaiyo
Yakavimbika yekuchenesa mhando
Zvehupfumi uye zviri nyore kuisa
Yega-yekuchenesa firita zvakare zita firita dzimba / filtration sisitimu, inoumbwa yakatwasuka cylindrical muviri, yekuisa chisimbiso cap, flange, kubatanidza plat nezvimwewo mukati mukati ungasarudze akasiyana filtration chiyero chesefa chinhu. Maitiro ekubatanidza anogona kunge ari marudzi mazhinji emaumbirwo akadai sebhaonet uye tambo yekubatanidza. Firita chiyero uye yekubatanidza nzira inowanikwa zvinoenderana nevatengi maitiro maitiro Sefa zvinhu iSUS304, SUS316L \_ Hastelloy alloy. Nzvimbo yemukati yakapukutwa, inopfuudzwa neasidhi mvura uye isina kona yakafa.
Kuzvichenesa-yega firita inoshanda musimboti
Sefa inotanga nzira yekuchenesa kana musiyano kumanikidzwa kweiyo inopinda uye nzira yekubuda inosvika pane yakatarwa kukosha. Iyo yega yekuzvichenesa maitiro ine nhanho mbiri: iyo drain vharafu pane yekupedzisira butiro yefaira inovhura; iwo mabhii maviri esimbi esimbi mune ontology mesh inotyairwa nemota mukati, ipapo tsvina iyo inotorwa nemesh ichakweshwa nebhurasho resimbi uye ichaburitswa kubva muvharuvhu yekudonha. Iyo yese yekuchenesa maitiro inotora anenge masekondi gumi nemashanu kusvika makumi matanhatu, nguva ino, iyo filtration sisitimu haimire uye iyo yese mashandiro enzira inopedzwa nebhokisi rekutonga.
Chengetedza hutano uye chengetedzo yevanoshanda - Iine hurongwa hwakakomberedzwa zvachose, hapana chigadzirwa chine njodzi senge utsi hunogona kupunyuka pachinogumira kuratidzwa kweanoshandisa zvigadzirwa zvako zvemvura.
Wedzera mitengo yako yekugadzira - Iine yayo yekuzvichenesa dhizaini hapana anomira ekuchinja firita midhiya, zvichikonzera kuenderana uye kwakavimbika kusefa.
Natsiridza chigadzirwa chako mhando - Iyo yakavharwa sisitimu inobvisa njodzi yekukanganisa inopinda yako yekugadzira tambo.
Deredza marara uye mashandiro ekushandisa - Iyo yekuzvichenesa-yega sefa inobvisa kudiwa kwekutsiva firita midhiya uye kurasa mari, kudzikisa chigadzirwa kupambadza, mari yevashandi uye nguva yekuzorora.
1. Simbi: inoshandiswa pakurapa mvura kusefa mune yakasvibirira munda, sintering pellet chirimwa, kutonhodza mvura kusefa kwekuputika furna, kutenderera chigayo, kuenderera kukanda muchina uye mamwe masisitimu, uye kusvibiswa kusefa kweiyo yakanyanya-kumanikidza mvura phosphorus kubvisa system.
2. Mota: Midziyo yekugadzira yekumonera inoshandiswa zvakanyanya mumasisitimu ekurapa mvura emota, matarakita, midhudhudhu, uye injini.
3. Simba chirimwa: Iyo inoshandiswa kune chaiyo prereatment chikamu cheakakwira-kuchena kwemvura kugadzirira emagetsi chirimwa boilers, kusefa kwejenareta kutonhora kwemvura uye kuvhara mvura, uye iyo system 13-4 inogona kushandiswa sedivi firita kana mvura kunwa kwakakura kwazvo.
4. Petrochemical indasitiri: mune ino tenderera mvura munda yeparutivi filtration kurapwa, imwe kana akawanda mamodheru anogona kuve akabatana muakafanana ekurapa kukuru panzvimbo yefaera zvinhu filtration, ichideredza firita zvinhu filtration mutoro, kudzivirira yakawanda yakawanda yekugeza mvura yekushandisa uye kuchengetedza mari. .
5. Mapindu ezvekurima uye zvigayo zvemapepa: Muzvimisikidzo nematanho, michina yekuvhara uye kupfeka kunokonzerwa netsvina kunofanira kudzikiswa. Naizvozvo, zvinodikanwa kuti usarudze zvigadzirwa zvepamusoro-zvine mutsindo, zvine mutsindo, michina, chikafu kana zvimwe: otomatiki uye chaiwo Kufirita kudzivirira kuvhara kwenzira yemvura inotonhora.
Kuzvichenesa firita yakajairika parameter
Kushanda kuyerera mwero 20-5000m3 / hMhando dzakasiyana dzemvura uye firita chaiyo ine huwandu hwekuyerera huwandu hwakasarudzika
Kushanda kumanikidza 2bar-10barBooster pombi michina inogona kuiswa mudhiraini nzira kana iyo kana iyo yekumanikidza yekumanikidza yakaderera
Dhonza vharafu Saizi 25mm; 50mm; 80mm
Kuchenesa nguva 30-60S
Kuchenesa kushandiswa kwemvura (nguva dzese) ≤5%
Pashure: Pleated firita element microporous yakapetwa firita yakananga fekitori
Zvadaro: Sintered firita element kenduru firita yakanyanya kushanda
Cartridge Filter Dzimba
Cartridge Housing Sefa
Sefa Housing Yekudya
Dzimba Cartridge Firita
Perforated Tube Sefa Housing
PVC Cartridge Sefa Housing
Stainless Simbi Cartridge Firita Dzimba
Stainless Simbi Sefa Housing
Stainless Simbi Mvura Sefa Housing
Emulsion Sefa mukaka Sefa Ine Tri Clamp / Weld ...